Apache NetBeans 11.3 Inosvika ine Rima Nyowani Yemukati, HiDPI Kuvandudza, uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
La Apache Software Foundation yakazivisa kuburitswa kwe iyo nyowani vhezheni yenzvimbo inosimudzira yekusimudzira "Apache NetBeans 11.3", Iyi iri vhezheni yechishanu yakagadzirirwa neApache Foundation mushure mekuchinjiswa kweNetBeans kodhi naOracle uye yekutanga vhezheni mushure mekunge purojekiti yatorwa kubva kune incubator ichienda muchikamu chemaApache.
1 Chii chitsva muApache NetBeans 11.3?
2 Maitiro ekuisa NetBeans 11.3 paLinux?
Chii chitsva muApache NetBeans 11.3?
Imwe yemitambo mikuru inomira mushanduro iyi nyowani ndeye kubatanidzwa kweiyo nyowani yerima interface inoratidza modes. Nzira itsva dzatinogona kuwana ndedze Rima Simbi uye Rima Nimbus, kuwedzera kune izvo zvayakafungidzirwawo iyo nyowani FlatLaf theme.
Uyewo yakakwidziridzwa rutsigiro rwepikisheni yekushomeka kwekuratidzira inoratidzwa (HiDPI) uye yakareruka HeapView widget.
kunze kwaizvozvo yakawedzera rutsigiro rwe Java Java 14 chikuva, yakarongerwa kuburitswa munaKurume 17.
Ichi inosanganisira kujekesa kwema syntax uye fomati yekodhi yezvakagadzirwa neiyo nyowani "rekodhi" kiyi kiyi, iyo inopa compact nzira yekutsanangudza makirasi, ichikubvumidza iwe kuti udzivise zvakajeka nzira dzakasiyana dzepazasi nzira, senge dzakaenzana (), hashCode () uye toString ().
Yakawedzerwa rutsigiro rwekutanga nzira yemapurogiramu akaonekwa muJava 11, inounzwa seimwe chete sosi kodhi faira (kirasi inogona kumhanyisa yakananga kubva kune iyo kodhi faira, isina kugadzira kirasi mafaera, JAR mafaera, uye ma module). MuNetBeans, izvi-faira-rimwe chete zvirongwa zvinogona kugadzirwa kunze kwemapurojekiti muFavorite hwindo, kumhanya, uye kukanganisa.
Zvakare neiyo kugona kudzosera iko kutendeuka kwemavara ezvinyorwa iyo yakaonekwa mumagazini yekupedzisira, inosanganisira multiline zvinyorwa zvemashoko pasina kushandisa mavara ekupunyuka mairi. Mune kodhi mhariri, zvinyorwa zvino zvinogona kushandurwa zvidzokere kumitsara.
Uye yakavandudzwa Gradle kuvaka system rutsigiro. Gradle Tooling API yakagadziridzwa kuita vhezheni 6.0. Wakawedzera rutsigiro rwekudzokorora dhairekitori repamba uye musangano wakasanganiswa (Gradle Composite Project). Kuzivikanwa kweprojekti kunowanikwa mumutauro weKotlin. Wakawedzera rutsigiro rwekumanikidzwa kutangazve kwemapurojekiti.
Pane dzimwe shanduko dzinobuda pachena:
Kune mapurojekiti anoshandisa iyo Maven kuvaka system, zvigadziriso zvakawedzerwa kudarika iyo yakasarudzika JDK vhezheni.
Zve PHP, chivakwa uye nzira yekuzadzisa zvinopihwa pasina "$ this =>".
Yakashanda kubvisa yambiro panguva yekubatanidzwa.
Groovy 2.5.9, junit 5.5.2, uye GraalVM 19.3.0 maraibhurari akagadziridzwa.
Muchengeti anowedzera chimwe chinhu kuti aone uye kubvisa madhairekitori ekare uye asina kushandiswa eNetBeans.
Maitiro ekuisa NetBeans 11.3 paLinux?
Kune avo vanoda kuwana iyi nyowani vhezheni, ivo vanofanirwa kurodha pasi sosi kodhi yekushandisa iyo yavanogona kuwana kubva pane iyi link iripazasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Apache NetBeans 11.3 Inosvika ine Rima Nyowani Yemukati, HiDPI Kuvandudza, uye Zvimwe
Nekuda kwekutya kwechirwere cheCoronavirus, GDC 2020 yakamiswa